XURGUFTII KHALIIJKA: Sacuudiga oo Gantaal ku Dhuftay Diyaarada Qatar Airways – Xeernews24
XURGUFTII KHALIIJKA: Sacuudiga oo Gantaal ku Dhuftay Diyaarada Qatar Airways
15. August 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Ciidanka Cirka Dalka Sucuudiga ayaa toogtay mid ka mid ah Diyaaradaha Rakaabka ee Sharikadda Qatar Airways,kaddib markii ay sheegeen in ay ku xad gudubtay hawada dalka Sucuudiga.
TV-ga Al Carabiya ayaa baahiyay muuqaalka Diyaarad Rakaab ah oo ay leedahay Qatar Airways oo ay Ciidamada Tooganayaan,TV-ga oo arrintan falanqeeyay ayaa sheegay in toogashada Diyaaradda ku xad gudubtay Hawada Dalka Sucuudiga ay caadi tahay.
lama sheegin in gantaalkaas uu Diyaaradda ku dhacay iyo in kale,TV-gana ma muujin waxa dhacay xilliga bartilmaameedsiga,waxaase uu sheegay in Dowladda Sucuudiga ay ku saxneynd tallaabadaas.
Arrintan ayaa dhacday Maalmo ka hor waxaana Dowladda Sucuudiga ay ku doodday in Xeerarka Caalamiga ah ay fasaxayaan in Dalka Hawadiisa lagu xadgudbo ay u furan tahay labo arrin middood.
Tan hore in Diyaaradda ku xad gudubtay Hawada dal kale loo diro Diyaaradaha dagaalka ee Dalkaas,qasabna lagu soo dejiyo kaddibna Rakaabka saaran mid mid loogu ganaaxo lacag,tan labaad in Dalka Hawadiisa lagu xadgubay uu toos u toogto Diyaaradda oo uu soo rido isaga oo cudur daar u heysta in hawo laga mamnuucay ay gashay ogeysiis la’aan.
Twitterka ayaa aad loogu lafa guray arrintan waxaana dowladda Sucuudiga lagu eedeeyay in ay ka bad badineyso khilaafka hadda u dhaxeeya Waddamada Khaliijka Carabta iyada oo Dolwadda Qadarna ay dhanka diblomaasiyadda xoogga saareyso.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/08/qatar-airline.jpg 250 480 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-08-15 11:14:282017-08-15 11:14:28XURGUFTII KHALIIJKA: Sacuudiga oo Gantaal ku Dhuftay Diyaarada Qatar Airways
Khilaaf Ka Dhex Qarxay Musharrax Muuse Biixi Iyo Cabdiraxmaan Saylici + Qorshaha... DAAWO: Shirkad Imaaraadka laga leeyahay oo Itoobiya ku Cadishay Dekada Berb...